SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Paris Saint-Germain vs Real Madrid ka hor kulankooda habeen dambe ee Champions League… (Yaa xiddigaha ugu badan ku leh?) – Gool FM
(Madrid) 25 Nof 2019. Kooxaha Real Madrid iyo Paris Saint-Germain ayaa laga sameeyey shax isku dhaf ah ka hor kulankooda ay wada ciyaarayaan habeen dambe ee heerka Guruubyada UEFA Champions League.
Kooxda reer Spain ee Real Madrid ayaa habeen dambe soo dhoweyn doonta Naadiga PSG kulankooda labaad ee heerka Guruubyada Champions League xilli ciyaareedkan.
Kulankii hore ee ka dhacay caasimadda Faransiiska ayaana la xusuustaa in Los Blancos ay waji-gabax kala soo laabatay markii looga soo adkaaday 3-0.
Real Madrid ayaana habeen dambe indhaha ku haysa inay ka aar-gudato kooxda Paris Saint-Germain marka ay ku soo dhoweynayaan caasimadda Spain.
Haddaba shabakadda ciyaaraha ee Sports Mole ayaa shax isku dhaf ah ka sameysay labada kooxood, iyadoo meesha laga saarayo oo aysan ku jirin xiddigaha dhaawaca ku maqan iyo kuwa ganaaxan, kaliyana waxaa shaxdan laga sameeyey xiddigaha la heli karo kulankan.
Kooxda ku guuleysatay horyaalka Ligue 1 ee PSG ayaana shaxdan isku dhafka ah xiddigaha ugu badan ku leh, waxaana laga siiyay lix ciyaaryahan, halka kooxda reer Spain ee Real Madrid ay ku leedahay kaliya shan ciyaaryahan.
Kulankan ayaa sida qorshuhu yahay waxa uu garoonka Santiago Bernabeu ka baasmi doonaa habeen dambe marka ay saacadda Soomaaliya tahay 11:00 Habeennimo.